Debian 7 "Wheezy" iyo QEMU-KVM (II) finalka | Laga soo bilaabo Linux
Saaxiibbo waad salaaman tihiin !. Waxaan sii wadaynaa Hordhaca isticmaalka QEMU-KVM ee Debian Wheezy si loo sameeyo mashiinno farshaxan ah. Si loo fududeeyo wada xiriirka hada kadib waxaan wici doonaa “martigeliyaha"Marti ku noqo mashiinka taageera dhamaan mashiinada farsamada, iyo"Guest"Ama Marti gal mashiin kasta oo dalwad ah.
Maanta waxaan arki doonaa sida aan ku heli karno Martida iyo Martida cinwaanada IP ee isla shabakadda, iyo sida loo maareeyo Martida iyo Martida fog.
Iyo iyada oo aan la sii fahmin, aan u dhaadhacno ganacsiga!
1 Sidee loo helaa Martida iyo Martida cinwaanada IP-da ee LAN?
2 Sida loo Maareeyo Martida fog iyadoo la adeegsanayo Iskuxiraha Maareeyaha Mashiinka Virtual
Sidee loo helaa Martida iyo Martida cinwaanada IP-da ee LAN?
Maqaalka hore markii la rakibayo xirmooyinka lagama maarmaanka ah waxaan kugula talineynaa buundooyinka-maacuunta y hal. Midka hore ayaa noo oggolaan doona inaan sameyno Buundada, tan labaadna waxay si sax ah uga tarjumaysaa interface interface Maareeyaha Mashiinka.
Ujeeddooyin wax ku ool ah iyo in loo awoodo in lagu meeleeyo cinwaanada IP-ka ee shabakadeena Martida, waxa ugu horreeya ee ay tahay inaan abuurno waa a Bridge Bridge ama “Bridge” oo ay la socdaan kaararka (yada) shabakadda martigeliyaha. Waxaa lagu gaari karaa siyaabo badan sida ku cad dukumiintiyada la socota ee ku yaal / usr / shar / doc / buundooyinka-utils, ama midka laga helo internetka. Waxaan ku samayn doonaa adoo sixid u samaynaya feylka qaabeynta / Iwm / network / interfaces, laakiin maahan kahor intaan la joojin hawlgalka interface-ka eth0 (iyo kuwa kale)). Ma aanan ku tijaabin tan Maareeyaha shabakadda maaraynta isku xidhka shabakadaha. Uma adeegsanno Maareeyaha Shabakadda Dishktopkeena. Waayahay ?.
Waxaan joojineynaa isdhexgalka eth0 (iyo kuwa kale):
Waxaan tafatirnaa feylka / Iwm / network / interfaces tifaftirahayaga jecel waxaanna u deyneynaa waxyaabaha soo socda sida ku habboon tallada wiki.debian.org:
# Faylkani wuxuu sharxayaa isku xirnaanta shabakadaha laga heli karo nidaamkaaga # iyo sida loo kiciyo. Macluumaad intaas ka badan, kafiiri boggaga (5). # Isku xirka shabakada loopback auto lo iface lo inet loopback # Diyaarso isdhexgal gacanta, iska ilaali khilaafaadka, tusaale, maareeyaha shabakada iface eth0 inet manual # iface eth1 inet manual # iface eth1 inet manual auto br0 iface br0 inet static address 10.10.10.1 network 10.10.10.0 netmask 255.255.255.0 baahinta 10.10.10.255 albaab 10.10.10.10 Bridge_ports all # Bridge_ports eth0 Bridge_stp off # disable Spanning Tree Protocol Bridge_waitport 0 # no daahid kahor intaan deked lahelin buundada_fd 0 # dib udhigis la'aan
Waxaan kor u qaadnaa xiriirka br0
ifup bro Sugitaanka ugu badnaan 0 ilbidhiqsiyo # dib u dhac ma leh ka hor inta aan la helin deked si loo helo. Sugida br0 inay is diyaariso (MAXWAIT waa 2 sekan).
Faylka ku jira / Iwm / network / interfaces, waa inaan tixgelin siino:
U beddel cinwaanada IP-ka iyo subnet-ka kuwa LAN-ga ah.
U xilsaar 0 isla IP-ga ah in eth0 Jirka (IP-ga mashiinkeena).
Sadarka oranayabridge_stp off", Waxaa loola jeedaa STP (ka yimid Ingiriiska Sargagax Tree Phab -raac), taas oo ah borotokoollada heerka 2 ee shabakadda Habka OSI (Lakabka isku xidhka xogta). Shaqadeedu waa inay maamusho jiritaanka wareegyada shabakadaha shabakadda sababtoo ah jiritaanka xiriiriyeyaal xad-dhaaf ah (lagama maarmaan xaalado badan si loo damaanad-qaado helitaanka isku-xirnaanta). [tomado ka socota Wikipedia, Waayahay?]
Nidaamkan, markasta oo aan bilowno Martigeliyaha, isdhexgalka ayaa si otomaatig ah kor loogu qaadi doonaa. 0.
Kuweena ku dhaqma ee ku hagaya maqaalkii hore, waxaan xaqiijin doonaa hada wixii ka dambeeya in Saaxirka abuurka Mashiinnada Virtual-ka uu doorto asal ahaan aaladda isha "Qalabka kooxda eth0 (Bridge 'br0 ′)“, Sida Is-dhexgalka Shabakadda Virtual-ka ee Marti kasta (Virtual Machine) ee aan abuurno. Si kastaba ha noqotee waxaan haysan karnaa mashiinno kuxiran br0 ama NAT.
Qaabkan fudud waxaan ugu xil saari karnaa cinwaanada IP-ga ee LAN-ka mashiinnadayada dalxiis. Hubaal, inta ay yihiin cinwaanno aan la adeegsan. Haddii aan tijaabineyno - ama adeegsiga - nidaamka qalliinka ee leh jawi desktop ah oo LAN-keena waxaan ku leenahay adeege DHCP, waxaan ku habeyn karnaa kaarka shabakadda Martida si loogu qaabeeyo DHCP. Sidoo kale, waxaan u qaabeyn karnaa buundada br0 si ay uga hesho cinwaankeeda IP-ka serverka DHCP, in kastoo aysan ahayn tan ugu badan ee lagu taliyo.
Sida loo Maareeyo Martida fog iyadoo la adeegsanayo Iskuxiraha Maareeyaha Mashiinka Virtual
Waxa aan sharaxidoono waxay ku ansaxayaan Desktop-ka aan ugu talagalin inuu maareeyo martida martida (yada) martida. Dabcan, Martida fog waxay noqon karaan Desktops kale, ilaa iyo inta qalabkoodu leeyahay kordhinta ficil ahaanta.
Xirmada kaliya ee ay tahay inaan ku rakibno Desktopkeena waa ssh-askpass, ama kuwa aan isticmaalno GNOME el ssh-askar-gnome. Ha iloobin inaad rakibo xirmada server-server dhinaca fog ee martida loo yahay si ay uga marin karaan shh.
Ku darista Xiriiriyaha martida fog iyada oo loo marayo Maareeyaha Mashiinka Virtual waxaan sameyn doonaa waxyaabaha soo socda:
Sawiradu waa is-sharrax. Waxaan kugula talineynaa inaad daalacato DHAMMAAN xulashooyinka ay bixiso Maareeyaha Mishiinnada Virtual iyo Tijaabi sifooyinka iyo xuduudaha aan u gudbin karno Mashiinnada Virtual-ka ee lagu dhex abuuray.
Waxqabadkiina wuu dhamaaday. Illaa xiisaha soo socda!
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Casharrada / Buugaagta / Talooyinka » Debian 7 "Wheezy" iyo QEMU-KVM (II) finalka
Waxaan kuugu hambalyeynayaa shaqada aad ka qabatay QVM-ka. Hadda, waxaan dhammeeyaa casharrada ku saabsan rakibaadda iyo / ama qaabeynta ZPanelX maxaa yeelay ugu dambeyn waxaan ku guuleystey inaan rakibo iyada oo ay ugu wacan tahay tabaruca uu Petercheco ka bixiyey ku-tiirsanaanta ZPanel.
Sikastaba, isla marka aan dhammeeyo soo dejinta DVD-ga Debian Wheezy (raalli ahow haddii internetkaygu gaabis yahay), waan isku dayi doonaa.
Mahadsanid ElioTime !!!
Waad soo dhaweyneysaa saaxiib. Intaa waxaa sii dheer, waxaan rajeynayaa inay daabici doonaan qoraalkayga ku saabsan ZPanelX oo ugu yaraan ay shaashadaha ku dhajin doonaan sida ay wax u dhaceen.
Waan ku faraxsanahay inaan ku caawiyey saaxiib 😀
Waad ku mahadsantahay talada, petercheco. Maxaa intaa ka sii badan, markaan rakibayo zpanel, waxaan kugula talin lahaa inaad isticmaasho ip gudaha ka ah kan banaanka ama kan guud (si aan runta u sheego, waxaan sameeyay qalad weyn oo ah adeegsiga shaashadda dadweynaha ama dibedda nasiib darrose, ma awoodo inaan helo guddiga oo waa inaan sameeyaa mar kale.
Waan ka xumahay !!! Waxaan kaliya ogaaday in amarka sawiradu uu gadaal yahay. Taasi waa, inay ka akhriyaan salka hoose ilaa kor. 🙂
Aad u wanaagsan asxaabteyda, sii wad wax ku biirinta wanaagsan 🙂
Mahadsanid sxbkey !!!.
Waxaan tijaabinayaa opera-da cusub, hadda in yar oo gaabis ah ...
Xitaa ma dhigeyso opera ... maxaa fashilmay
Ninyahow .. tijaabooyinka ku samee dun kale .. kaalay, ha noqon mid xun. 😛
Mahadsanid Elav. Waxay ila tahay aniga inay tahay inay meelo kale ku sheekaystaan. 🙂
Deluxe isbarbar dhig: D!
Aad baad ugu mahadsantahay casharka!
Adaa mudan. Waad ku mahadsantahay faallooyinkaaga.
Salaan iyo bogaadin casharka, waxaan baarayaa sida loogu wanaajiyo dab-damiska (clearos, monowall, pfsense ...) su'aashaydu waxay tahay sidee baa mid kaararka shabakada ah loogu shaqeeyn karaa oo kaliya mashiin dalwad ah, taas oo ah, in mashiinka casriga ah waa yaa arki kara oo maamuli kara laakiin nidaamka martida loo yahay ma arko.
@xDayaannax Salaan kadib marka hore. Xalka suuragalka ah wuxuu noqon doonaa waxyaabaha soo socda, in kasta oo ay tahay inaan kuu sheego inaanan isku deyin. Waayahay ?.
Aynu nidhaahno waxaad ku haysataa Marti-geliyaha taageeraya Firewall-ka Virtual, ugu yaraan laba shabakadood oo isku-xidha: eth0 iyo eth1. Ka soo qaad in isla Martidaada aad haysato mashiinno dheeri ah oo dheellitiran oo ku xiran buundada br0, oo lagu sheegay sidan:
iface br0 inet guurto
Bridge_stp off # gab barnaamijka Protocol-ka dhirta
Bridge_waitport 0 # dib u dhac malaha intaan deked la helin
Bridge_fd 0 # dib u dhac la'aan
Ogsoonow in kaliya interface-ka 'eth0' la xiray. Isku xidhka 'eth1 interface', ee aanu isticmaalin Marti-geliyaha, ayaa si sax ah u ah midka ay tahay inaad ku darto Firewall-kaaga Virtual-ka oo aad si habboon u qaabeysid si ay ugu xirmaan internetka WAN iyada oo loo marayo cinwaanada IP ee ay ku siiyeen. Dabcan, Firewall waa inuu sidoo kale yeeshaa shebekad kale oo isku xirta LAN-gaaga una adeegta sida Gateway ama Gateway kombiyuutarada intiisa kale ee aad u fasaxday inaad kaga baxdo Firewall-ka. Isku xirkaasi wuxuu noqon doonaa midka la abuuray markii aad doorato br0 oo ah isku xirka mashiinkaaga farsamada.
Waxaan sidoo kale kuu sheegayaa, markaad u gudbiso eth1-ka martida 'Firewall Virtual Firewall,' Marti-geliyuhu ma awoodi doono inuu isticmaalo, ilaa aad ka sameysid qaabab casri ah kaarkaas shabakadda ah mooyee.
Iskuday oo ii sheeg.
Sideen ku maamuli karaa laba kaar oo shabakad ethernet ah qemu? midna martigaliyaashayda midna qemu. Waxaan u sameeyaa maxaa yeelay waxaan haystaa laba dhibic marin oo leh xiriiro madax bannaan. Fikraddayduna waa in la isticmaalo dhowr jeer oo la soo dejiyo durdur (mishiinka farsamada ee qemu) iyo kan kale ee maalin kasta loo isticmaalo archlinux-kayga) (host)
waxaad ka sameysan kartaa buundo kaarka aad rabto inaad ku xirto toggaaga. Tusaale ahaan, haddii eth1 ay tahay waxa aad u rabto taas, waxaad ku dhawaaqeysaa buundo aad la socoto. markaa waxaad ku dhejineysaa kaarka shabakada dalwaddii mashiinkaaga durdurka buundadaas.
Waad salaaman tihiin markaad shabakad ku darsataan meesha aad ka saari kartaan si aysan hadhow u soo bixin
Isla meeshii aad ku abuurtay. Maamulaha Mashiinka Virtual ama Maareeyaha Virtual. Tafatir Menu - Faahfaahinta Xiriirka - Shabakadaha Farsamada. Boggaas, waxaad ku dartaa ama ka saareysaa shabakadaha casriga ah.
Salaan bulshada iyo Fico, waad ku mahadsan tahay labada maqaal, waa kuwo aad u faa'iido badan oo fudud. Waxaan hayaa QEMU-KVM oo ku rakiban mashiin i686 ah oo wata Debian Jessie 8.3 wax walbana way fiican yihiin. Waxaan jeclaan lahaa taas IP-ga go'an ee aan ugu talagalay martida (taas oo ah kombiyuutarka leh Debian Jessie 8.3), mid ka mid ah martidayda waa la heli karaa taas oo ah mashiin dalwad leh sidoo kale Debian Jessie 8.3 oo aan u isticmaali doono web ahaan iyo keydka keydka xogta si markaa shabakada shaqadeyda dhexdeeda, asxaabta qaar ay ugu xirmi karaan keydka xogtan iyaga oo adeegsanaya IP-keyga go'an sida haddii lagu rakibay kombiyuutarka martigeliyaha. Waxaan ku qeexay qaabeynta isku xirnaanta buundada kombuyuutarkayga martida loo yahay sida aad ku sharaxday maqaalkan, wax walba way fiicnaayeen oo ku dhexjiray maamule ahaan waxaan u beddelay shabakadda 'nat0' oo loo yaqaan 'br192.168.122.0' xulashooyinka isku xirka mashiinka kumbuyuutarka ee aan sheegayo, laakiin hadda aniga kama heli karo SSH ama mid ka mid ah adeegyadan martida martida oo leh IP-ga go'an oo aan ugu qoondeeyay shabakada deegaanka ee caadiga ah 24/XNUMX ee QEMU-KVM markay ahayd nat. Ma jiraa qof iga caawin kara inuu ii sheego sida aan ugu isticmaali karo IP-ga gurigeyga martigeliyaha inuu kula xiriiro martidan maxalliga ah iyo aniga oo u sii maraya kumbuyuutarrada kale ee asxaabteyda fadlan?
Jatan ugu jawaab
Sida loo beddelo tirada noocyada xirmo ee xirmo leh YUM